XOG:- Madaxweyne Farmaajo oo safarkiisa seddaxaad ee dibadda toddobaadkaan gudihiisa ku bixi doonno – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Madaxweyne Farmaajo oo safarkiisa seddaxaad ee dibadda toddobaadkaan gudihiisa ku bixi doonno
Ilo xog-ogaal ah oo aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo toddobaadkaan gudihiisa markiisi seddaxaad u amba-bixi doonno dalka dibadiisa.
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa in maalinta berri ay u safraan magaalada Cammaan ee dalka Urdun, kadib markii lagu casuumay shir madaxeedka dalalka Jaamacadda Carabta ee halkaasi lagu qaban doonno.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la xaqiijiyay inuu ka qeybgeli doonno shirkaasi, waxaana sidoo kale shirkaasi ka qeybgali doonno madax badan oo ka tirsan dalalka ku bahoobay Jaamacadda Carabta.
Madaxda kale ee shirkaasi ka qeybgali doonto ayaa waxaa ka mid ah Boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan Bin Cabdicasiis Aala Sucuud iyo madax badan oo Carbeed oo uu ka mid yahay Boqorka Marooko Boqor Maxamed-ka lixaad.
Shirkaasi oo furmi doonno maalinta Arbacadda oo ay taariikhdu ku beegan tahay 29-ka bishaan Maarso ayaa waxyaabaha looga hadli doonno waxaa ka mid ah sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka taagan dalalka Carabta.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii xilka loo doortay kadib safarkiisa koowaad iyo labaad ku kala tagay dalalka Sacuudiga iyo Kenya, kadib markii uu casuumaad kala duwan ka helay boqorka Sucuudiga Boqor Salmaan Bin Cabdicasiis Aala Sucuud iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.